တောင်းကြရအောင်... — MYSTERY ZILLION
August 2009 edited February 2011 in File Request
ဆော့ဖ်၀ဲလ်တွေကို ဒီ thread လေးမှာ တောင်းကြတာပေါ့.. ကိုပေါက်ရဲ့ ဟိုအဖွဲ့အစည်းဆောင်ပုဒ် thread ကလဲ ပို့စ်တွေ ပြည့်နေတော့ ကိုယ့်ပို့စ်တောင် မနည်းရှာနေရလို့.. ကဲ စတောင်းပြီ .. ပေးဖို့သာပြင်ထား........
Microsoft office 2007 လေးလိုချင်ပါတယ်... rs link တွေ crack မပါတာတွေတော့ မလုပ်နဲ့နော်.. :77::77::((
ပြီးတော့ Adobe Premier Pro လေးလဲ လိုချင်ပါတယ်.. ထုံးစံအတိုင်း crack လေးတော့ပါအောင်ပေးနော်.. :77::77:
အွန်သူမျက်နှာရဖို့အရေး အရပ်ကူပါလူဝိုင်းပါလုပ်နေပါလား။ ရော့ ဟွင်းB-):w
အမ်.. All RS မလုပ်နဲ့လေ..:(( Adobe premier က ကျွန်တော်သုံးဖို့ကို ဟွန်း.....:( သူနော်.. လူဇိုး.. ifile ဖြစ်ဖြစ် media fire ဖြစ်ဖြစ် 4shared ဖြစ်ဖြစ်ကနေ တင်ပေးပါနော်.. နော်လို့.. :D:D
အမ်.. All rs မလုပ်နဲ့လေ..:(( adobe premier က ကျွန်တော်သုံးဖို့ကို ဟွန်း.....:( သူနော်.. လူဇိုး.. Ifile ဖြစ်ဖြစ် media fire ဖြစ်ဖြစ် 4shared ဖြစ်ဖြစ်ကနေ တင်ပေးပါနော်.. နော်လို့.. :d:d:d
လူဇိုး ဒီမှာတောင်မှ ၁၀၀မက် ကိုအနိုင်နိုင်တင်နေရတာ။:2: ကိုအလက်ဇန္နားနဲ့ လေသံများညှိထားသလားမသိ။ အဲလိုလုပ်ကြနဲ့လေ cd ဆိုင်မှာသွားဝယ်ပေါ့လို့ :106:
ဘယ်သူ့ဆီမှာရှိလဲသိဘူး ရှိရင်တင်ပေးဦး batch file compiler 4.21 full version လေးပါ။
4.21 တော့မတွေ့ဘူးဗျ။ Quick Batch File Compiler 3.20 ပဲတွေ့တယ်ဗျ။ အသုံးတည့်လို့တည့်ငြား တင်ပေးထားပါတယ်။:)
window server 2003 မှာ တင်ချင်လို ့ပါ antivirus တစ်ခုလောက် share ကျပါဦး။ customer က urgent ဖြစ်နေလို ့ပါ။ မြန်မြန်လေးပေးစေချင်ပါတယ်။ upload လုပ်ဖို ့အဆင်မပြေလဲ ဘာသုံးသင့်တယ်ဆိုတာလောက် recommand လုပ်စေချင်ပါတယ်။
Kaspersky သုံးပါလား Windows Server ပေါ်လဲတင်လို့ရတယ်။:67:
kaspersky တင်လို့မရဘူးဗျ။ 2003 မှာ norton ပဲတင်လို့ရတယ်။ အခြား ဘာမှ တင်တာ အဆင်မပြေဘူး။
ရန်ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူးလား.. ရန်ကုန်မှာဆို ဝယ်လိုက်ပေါ့.. ၁ ခွေကို ၁၀၀၀ ပဲပေးရတာ..
အဲလိုလုပ်နဲ ့လေ ဘယ် version တင်သင့်တယ်ဆိုတာလေးပါ recommand လုပ်ဦးလေ ဂျာ
ကျေးဇူးပဲကိုရောင်စိန် crack ပါတော့ သုံးလို့ကောင်းပါတယ် press any key မလိုတော့လို့။
server 2003 မှာ တင်ချင်လို ့ပါ antivirus တစ်ခုလောက် share ကျပါဦး။ customer က urgent ဖြစ်နေလို ့ပါ။ မြန်မြန်လေးပေးစေချင်ပါတယ်။ upload လုပ်ဖို ့အဆင်မပြေလဲ ဘာသုံးသင့်တယ်ဆိုတာလောက် recommand လုပ်စေချင်ပါတယ်။[/QUOTE]
window server 2003 ဆိုရင် norton antivirus corporate edition ဖြစ်ဖြစ် symantec endpoint protection ဖြစ်ဖြစ်သုံးရင် ရနိုင်ပါတယ်\_:D/
server 2003 မှာ Avira Anti-virus ကိုတင်လို့ရလား....:39::39::39:
အဆင်မပြေရင် တခြားဘာတင်လို့ရမလဲ။Norton ကလွဲလို့ပေါ....
McAfee ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် ။
မှာချင်တာက ကိုယ်သုံးမည့်Firewall က လက်ခံသည့်Anti-Virus ကို တင်တာအကောင်းဆုံးပါ ။
ဦးကတော့McAfee Enterprise 8.5i ကိုသုံးတာ အဆင်ပြေပါတယ် ။
နောက် Nod 32 လည်းအဆင်ပြေပါတယ် ။
အစ်ကိုရေ နည်းနည်းလွဲနေလားလို့နော်။ ကျနော်အခု သုံးနေတာ kaspersky 6.0 ပါ။ Total Space Security ပုံစံသုံးထားပါတယ်။ kaspersky က windows server 2003 ကို support ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါ့အပြင် gateway server, file server, exchange server, proxy server စတဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ product 2003 server ဗားရှင်းတွေအတွက် support ပေးပါတယ်။
MySQL ဘဲဖြစ်ဖြစ် MSDN ဘဲဖြစ်ဖြစ် တို့နဲ့ တွဲသုံးရင် client တွေမှာ Kaspersky ဘယ်ဗားရှင်းဘဲတင်ထားပါစေ kasper Lab နဲ့ update လုပ်လို့ရပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူ၊ စမ်းသုံးချင်တဲ့သူတွေ ဒီမှာယူလိုက်။ user 500 စာပါ။ အဆင်ပြေတာ မပြေတာတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကျနော့်ဆီမှာတော့ အားလုံး အဆင်ပြေနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး Supermarket ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ Head Office မှာ အဲဒီ့နည်းကို ကျနော်ဆင်ပေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီ့ကိစ္စကြောင့်လည်း ကျနော်လည်း အလုပ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော် တပ်ဆင်ပေးစဉ်တုန်းက သရက်မြို့ ဟက်ကင်းဒေး ၀င်နေလို့ အရေးပေါ်တင်ပေးလိုက်တာ။ user 600 ပါတဲ့ real လိုင်စင်ကြီးပါ။ နောက်တော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေတော့ ကျနော်က ပိုက်ပိုက်ပေးမှာလား၊ အပြင်က၀ယ်သုံးမလားလို့ပြောလို့တဲ့ ကျနော့်ကို fire တဲ့။ ပြီးတော့ပြောသေးတယ် kasper ကို ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်တဲ့ အခုထိတော့ သုံးနေဆဲဘဲဗျာ။ တော်တော်လေးစိတ်နာဖို့ကောင်းတယ်။ ကျနော်ဆိုလိုတာက ကျနော်ရောင်းစားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီဟာဘဲ သုံးလို့အဆင်ပြေရင် ဒီဟာဘဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျသင့်တဲ့ ငွေပေးပေါ့။ သုံးပါလို့လဲ မဆိုခဲ့ပါဘူး၊ kasper ဘဲသုံးမယ် ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းဆီကတော့ ၀ယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် အပြင်က၀ယ်သုံးပေါ့။ အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံမပေးဘဲ အလကားသုံးချင်လို့ ကျနော်ကို ပထုတ်လိုက်သလိုကြီးဘဲဗျ။ အခုထိလည်း မဖြုတ်ရသေးဘူး။ သုံးနေတုန်းဘဲ။ ကျနော်အဲဒီ့ကို မရောက်ခင်တုန်းက Anti-Virus ဆိုရင် နော်တန်ကလွဲပီး ဘာမှ သိကြတာမဟုတ်ဘူး။ နော်တန်ကလည်း လိုင်စင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ free လောက်ဘဲသုံးနေကြတာ။ သူတို့ဘက်ကတော့ ကျနော်အလကားရထားတာကို သူတို့ကို ရိုုက်စားလုပ်တယ်လို့ထင်နေလားမသိဘူး။ ကျနောအနေနဲ့ကလည်း ဒီဟာကို Rapid ကနေရထားတာပါ။ ပရီမီယံ အကောင့်နဲ့ ယူထားတာပါ။ တစ်ကိုယ်ရေ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အလကားယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်မနှမြောတတ်ပါဘူး။ အခုဟာက သူတ်ို့ business အတွက် အများကြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်။ ဒါအပြင် သူတို့က business လုပ်နေတာလေ၊ business မှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှားရှားပါးပါးရထားတဲ့ တရား၀င် VPN port နဲ့ network ချိတ်သုံးနေကြတာလေ။ စုစုပေါင်း 600 လောက်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ အလကားဘဲရရ ၀ယ်လို့ဘဲရရ၊ မျှတအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ဗျာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်မဟုတ်တော့လို့ ကျနော့အသက်ချမ်းသာသွားတာထင်တယ်။ နို့မို့ဆိုရင် လူုကိုသတ် software တောင်လုပ်မလားမသိဘူးဗျ။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ကွေ့ကွေ့တော့ ပြန်ဆုံကြဦးမှာမို့ ဒီအတိုင်းလေးဘဲ သိမ်းထားတာ ကြုံလို့ပြောလိုက်တာပါ။ ဒီဟာ ဘယ်ကုမ္ပဏီလည်းဆိုတာ သိတဲ့သူတွေလည်းသိကြမှာပါ။ ကျေးဇုူပြုပီး နာမည်တော့ မပြောကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။ MZ ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးအတွက်ပါဗျာ။ နေရာလွဲသွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။
phoesix wrote: »
အကိုဒါလေးတွေ ကို download လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ၊ :77::77:
I cannot download from these sites.I do not know why i cannot download them. Waiting times are restarting again and again. So, please download them and upload in ifile.it. Please. :77::77:
Nokia ဖုန်းထဲ ထည့်ချင်လို့ Eng-Eng Dictionary လေးများ ဘယ်မှာ FREE ရနိုင်မလဲဗျာ ..
I want to kaspersky server key and can you share it
Eng-Eng တော့ မသိဘူးဗျ.. Eng-Myanmar ကတော့ ဒီအမ်ဇက်က ပေါင်းလုပ်ထားတာရှိတယ်.. လိုချင်ရင်
မှားတယ်............ 500 ပဲ......... :D
ကိုရောင်ကြီးက အပေးတော့ ကောင်းသားပဲ..... အဟီး.......:D
ကျွန်တော့်ကို လည်း software လေးတစ်ခုလောက်ရှာပေးပါဦးဗျာ........ ညည မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို မနက်ရောက်ရင် မေ့မေ့သွားတတ်လို့၊ အိပ်မက် Recording Software လေးနဲ့ ကြာရင်ပျောက်ကုန်မှာစိုးလို့ အိပ်မက် Back up လုပ်တဲ့ ဟာလေးပါရှာပေးနော်..... မရလို့ကတော့ တိုကျိုက ကိစ္စ အဖွပဲ.... :P
here ကိုပရစ် uploaded file. it is also included key for kaspersky server.
MP3 တစ်လုံးကို recording function ဖွင့်ပီး ခေါင်းထဲမြုတ်ထည့်ထားလိုက်။ ပီးရင် ဟိုနေရာကနေ USB ပို့ ထုတ်ထားလိုက် (နားရွက်)။ :D:D
အဲဒီမှာတင်ပေးထားပါတယ်..နှစ်နေရာတောင် တောင်းထားတာ အရမ်းအရေးကြီးနေလို့များလား
Hi bros and sis from MZ
Please download this one
and upload to media fire or other one. I already got this one
And If you have the cakephp framwork ebook, already, Please share to me.
I really really urgently.
and upload to media fire or other one.
ကျွန်တော် ifile.it မှာတင်ပေးထားပါတယ် .. Download ဒါပေမဲ့ အဲဒါက password နဲ့ဗျ .. ကိုယ့်ဟာကိုဘဲ password Crack/remove ရင်လည်း Crack ရှာချင်လည်း ရှာလိုက်တော့ ..
ကျွန်တော် ကတော့ avast 4.8 လေးတင်ထားပါတယ် အဆင်ပြေပါတယ်
Java ဖုန်း ဆိုရင် ဒါလေး ဒေါင်းလိုက်နော်
Symbian ဆိုရင်တော့ ဒီက ယူနော်
ဗမာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း portable လေးရှိမလားမသိဘူး
တစ်ခါတစ်ခါ စာလုံးပေါင်းက သိသလိုလိုနဲ့မသိဘူးဖြစ်နေတော့မှားသွားမှာစိုးလို့
ဗမာလိုသတ်ပုံကျမ်းလေး (portable or something software)လေးလိုချင်လို့
cd,vcd,dvd, ကနေ mp3,mp4 ပြောင်းတာလေးတစ်ခုလောက်
USB ကို password ပေးလို့ရတာလေးတစ်ခုလောက်
password remover လေးတစ်ခုလောက်
key, password , user name လေးတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းပေးပါနော်
mediafire ကတော့တင်မပေးပါနဲ့ Access denied ဖြစ်နေလို့ပါ
အဲဒါတွေအကုန်လုံး mz မှာတင်ထားပီးသားတွေပါ....
MZ က ၀င်ကဘာလိုဖြစ်နေတယ် တော်ကြာတွေ့ပြီး တော်ကြာပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူး
ရှာကြည့်ပါသေးတယ်၊ တချို့့ ဟာတွေက mediafire မှာတင်ထားတာ ကျနော့ server က mediafire ကို access denied လုပ်ထားတယ်
တကယ်လို့ ရှိတဲ့နေရာသိရင် လိပ်စာလေးကူညီပါ
(ကစွန်းရွက် လို့တော့မပြောနဲ့နော် ဟင့် )
မွေးစကလေးတဲ ့...တောင်းတာတွေ က လည်း..ဟီး:d:d
လောဘက လည်း...တယ်ကြီးသကိုး ဟင်းဟင်း :):):)
ကိုသာသာပေးထားတာ ရှိတယ်ဗျ။ PDF ဖိုင်နဲ့။ လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။ general >> share အောက်မှာထင်တာပဲ။
Tuneup 2009 Product Key လိုချင်လို့ပါ/
agaoge wrote: »
serial ရော package ရောပဲ
ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းလောက်ထပ်တောင်းဦးမယ်.. ဒီဟာလေးတွေပါ.. ဒေါင်းပေးပါဦးနော်..
2. Adobe Flash CS3 Portable
3. Zlash with crack or serials or patch
ကိုစူဠလိပ်ရေ.. အစ်ကိုပေးတဲ့ photoshop portable က easy-share ကဒေါင်းခိုင်းတာဗျ. ကျော်လဲ ကျော်ရတယ်.. အကြာကြီးလဲ စောင့်ခိုင်းတယ်. ဒေါင်းတော့ဒေါင်းမရဘူး.. :14::47: ဒါနဲ့ rs ကပဲ ရှာပြီးဒေါင်းလိုက်တော့တယ်ဗျ.. ဟီး.. ကျေးဇူးပါနော်.. တင်ပြီးပြီးချင်း သိပ်တောင်မကြာဖူး.. အဖြေကရတာ. ဟီး..
photoshop cs3 portable လိုချင်သူများအတွက်...
ကျွန်တော်က rapid ကိုအစောကတည်းကတွေ ့တယ်ဗျ အဆင်မပြေမှာစိုးလို ့မတင်ပေးလိုက်တာ
ရပါတယ်ဗျာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲ sponsor ပေးမယ်သူဆိုတော့ဖားထားမှ :D:D
[FONT=&quot]သူတော်ကောင်းများ မစကြပါ (မကူညီတဲ့သူတွေက သူတော်ကောင်းမဟုတ်လို့မဆိုလိုဘူးနော် :D:D)
ကိုပုရစ်.. ကိုကို၀င်း ..ဇူးဇူး .. ကို အလက်စန္ဒား . ကိုယောက်စိန် ..ကိုရသာ
မြန်မာ မိသာစုး ဖို၇မ် မှာ ကျွန်တော် ဆော ့၀ဲလ် တစ်ခု တောင်းဖူးတယ်ဗျ..
HDloader soft ပါ.. rar ပမာဏ က 2MB.ဗျ
ဖြည်ချ လိုက်တော ့အားပါးးးး 2GB တောင် ကျော်တယ်..
လိုချင်တာ က rar .zip . တို့ ့ကို အဆမတန် ချုံ ့လို ့ရနိုင်မဲ ့ဆော ့၀ဲလ်လေး လိုချင်ပါတယ်..
ဟာတကယ်လား ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား အခုဟာကအဆတစ်ထောင်လောက်ချုံ ့လိုက်သလိုပဲနော်
အဲလောက်တောင်ချုံ ့လို ့ရလို ့ကတော့ ပျော်စရာကြီး
[FONT=&quot]သူတော်ကောင်းများ မစကြပါ (မကူညီတဲ့သူတွေက သူတော်ကောင်းမဟုတ်လို့မဆိုလိုဘူးနော် :d:d:d)[/FONT]
အကို ခဏတော့စောင့်ပါ.. ဒေါင်းတာက ဟုတ်တယ်.. ပြန်တင်ရင်တေရော..ပွဲကျမှယူမလား.. လက်ပ်တော့ပ်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ယူလာပေါ့နော်.. :d မရှိလို့.. (
ကိုရေလိုအေး ခဏတော့စောင့်ပါ.. ဒေါင်းတာက ဟုတ်တယ်.. ပြန်တင်ရင်တေရော..ပွဲကျမှယူမလား.. လက်ပ်တော့ပ်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ယူလာပေါ့နော်.. :d မရှိလို့.. (
မစာနာဘူးပဲပြောပြောမတ၇ားဘူးပဲပြောပြော itfile mediafire တခုခုကတင်ပေးပါ့လားဟင်
အဲဒီဘုစီဒီကို ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ဆိုင်မှာဝယ်လိုက်ပါလား။ တချပ်မှ ၅၀၀ လားပဲရှိတယ်။ :5:
၇ှာတာမ၇လို့ကိုယောင်စိန်၇ ဆိုင်နာမည်ညွှန်ပါလား နေ၇ှင်နယ်၇ယ် အက်တစ်၇ယ် လှည်တန်းက စတာဟတ်၇ယ်က မ၇ှိဘူးတဲ့ဗျ
download thread ထဲက လင့်ခ်ကမရတော့လို့ပါ
ပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် မေးလ်ကို ပို့ပေးပါလားဗျာ
[email protected] ပါဗျာ